Soro Egwuregwu Kachasị Ekele | Radị Rave
Soro Ndị klọb Ego
Daalụ maka ịgụ Style Rave
Bụrụ onye Insider!
Mepụta akaụntụ gị iji nweta:
-Emecha ọdịnaya site na ihe eji eme ọmarịcha, mma na ndụ ARO iji nyere gị aka ime nke ọma na ọrụ, na-elekọta mmadụ ma melite mmekọrịta gị.
-Atụ, ịma mma na ndụ EGO guzoro ọtọ na Onye guzobere anyị & Editor-in-Chief, Elfonnie. Meziwanye ụdị gị ma lelee mgbanwe ndụ gị niile.
-Ntinye njikọ Instagram peeji nke ụdị kachasị mma, ịma mma na ndị na - eso ụzọ ndụ ụwa niile, dịka esi gosipụta ya na Ihe Egosipụta Anyị.
-1 ọnwa FREE otu ($ 49.99 uru) ka anyị YB .RCC STYLE & (Oge a anaghị akwụ ụgwọ). Nke a na - enyere gị aka ịbanye n’ọnwa anyị Stylec & Ihe ịga nke ọma Masterclass ya na Q&A nnọkọ ya na Style Rave founders na ndị ọbịa ndị ọzọ pụrụ iche site na Zoom.
Oge izizi & ccessga nke Ọma Masterclass na-eme Satọde, Ọgọst 8, 2020. Anyị ga na-ekwu ụdị, ihe ịga nke ọma na usoro ịchụ nta ego!
Etinye n’ime gị! Mee elu ụdị gị, mara mma na ụdị nke gị
Chekwaa ihe ndi ozo mgbe ịdebanye aha gi taa
Tinyegharịa Paswọdu *
SR adịkwala mgbakwunye - $29.99 / 1 Year
Nweta ohere dijitalụ na-akparaghị ókè maka $ 59.99/ $ 29.99 kwa afọ.
Ihe ntanetị SR - $2.99 / 1 Ọnwa
Nweta ohere dijitalụ na-akparaghị ókè maka $ 4.99 / $ 2.99 kwa ọnwa
Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ
Enweghị ụzọ ịkwụ ụgwọ dị maka atụmatụ ndenye aha ahọrọ.
Nhazi. Biko chere...
Ozi Ebe E Si Nweta / Debit
Portal ịkwụ ụgwọ ga-emeghe na ihuenyo ọhụrụ. Biko mara na edobeghi ihe omuma ihe kaadi gi na ihe nkesa Style. A na-echekwa kaadi na uzo izoputa echeputara.
* Kagbuo oge obula *
Ga-akwụ ụgwọ kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ ruo mgbe ị kagbuo. Ọ bụrụ na ọnụego ndenye aha gị gbanwere, anyị ga-agwa gị ụbọchị 14 tupu ụbọchị ịkwụ ụgwọ gị na-esote. Site na ịpị 'Debanye aha' ị kwenyere na ị nabatara nke anyị Okwu & Ọnọdụ na anyị amụma nzuzo.
-Ama otu? Banye
STYLE RAVE bụ usoro ndu nke mmụọ nsọ nyere ndị niile hụrụ n'anya n'anya na ụdị ndụ ha na-ebi. Dabere na New York, anyị na-anụ banyere ihe kachasị mma na ejiji, mma, ụzọ ndụ na ọdịnala. N'ime afọ ole na ole, STYLE RAVE etolitela ghọrọ otu n'ime ụzọ mgbasa ozi ịntanetị ndị a na-akwanyere ùgwù nke na-ejere ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ ozi karịa nde 5 kwa ọnwa. Anyị kpebisiri ike ịnwe isi mmalite nke mmụọ nsọ maka ndị na - agụ akwụkwọ anyị nwere nghọta site na ịhapụ ọdịnaya nke na - eme ọ bụghị naanị ihe na - atọ gị ụtọ ma na - agwa gị ma nyekwa gị ike dịka ị chọrọ ịdịkwu mma, na-ebi ndụ karị ma nwee ahụ ike.